မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သမိုင်းအချက် (၄) ချက် -
မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သမိုင်းအချက် (၄) ချက်
Posted on February 1, 2019 February 1, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
Mask Party ဘာလဲ… ဘယ်လဲပေါ့အေ.. 😛
အနောက်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့၊ မြန်မာပြည်အပါအဝင် အာရှတိုက်တွေမှာလည်း ခေတ်စားလာပြီဖြစ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီ ဒါမှမဟုတ် Masquerade Party or Mask Party ဆိုတာ ယောင်းတို့ ကြားဖူးမှာပေါ့နော်။
ဒီပါတီအကြောင်းကို သိပေမဲ့ သမိုင်းကြောင်းအချက်အလက် စုံစုံလင်လင်မသိဘူးဆိုတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် Mask Party ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကို ဝေမျှပေးမယ်နော်…
၁။ Mask Party ဟာ ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ်။
မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီပွဲကို ဥရောပမှာ စတင်ကျင်းပတဲ့ကာလကို အမျိုးမျိုးပြောဆိုကြပေမဲ့ ဆယ့်ငါးရာစုထက်တော့ နောက်မကျဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီကာလဝန်းကျင်မှာ ဥရောတိုက်မှာမှ အီတလီနိုင်ငံဟာ မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီတွေစတင်ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။
Related Article >>> ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ကြေကွဲစရာအကောင်းဆုံးနဲ့ ပဟေဠိ အဖြစ်ရဆုံး လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ခု
မျက်နှာဖုံးတပ်ပွဲတွေစတင်ကျင်းပကတည်းက အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ကိုယ်ဘယ်သူမှန်းမသိအောင် ရုပ်ဖျက်ရတာပါ။ ဘာကြောင့် ရုပ်ဖျက်ပြီးကျင်းပခဲ့ကြသလဲဆိုတာ အတိအကျမဆိုကြပေမဲ့ ပါတီကျင်းပပုံကတော့ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူဘဲ ကွဲပြားပါတယ်။
တချို့ပါတီတွေက ပွဲတက်သူအချင်းချင်း ခန့်မှန်းရတဲ့ ကစားနည်း ကစားကြသလို၊ တချို့ကလည်း အစားအစာ မတည်ခင်းချိန်အထိ ရုပ်ဖျက်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဟိုရှေးခေတ်ကတည်းက အခုထိ တူညီတာက ပွဲတက်သူအားလုံး မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး ရုပ်ဖျက်ရတာပါ။
၃။ လူတန်းစားညီမျှမှုကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ ပညာမဲ့၊ ပညာတတ်၊ ဘာသာ၊ လူမျိုး ဆိုတာတွေ ဖယ်ရှားလိုက်ရင် အားလုံးဟာ လူသားတွေပါပဲနော်။ မျက်နှာဖုံးတပ် ပါတီဟာ ဒီသဘောတရားပါပဲ။
မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီကို စတင် ကျင်းပတဲ့အချိန်က ဥရောပတိုက်မှာ လူတန်းစား ခွဲခြားမှုအရှိန်မြင့်တဲ့ ကာလပါ။ အထက်တန်းလွှာတွေက သာမာန်လူတန်းစားတွေနဲ့ ရောနှောခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မျက်နှာဖုံးတပ် ပါတီပွဲမှာတော့ လူတိုင်းဟာ မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတာဖြစ်လို့ အပေါ်ယံတွေကွာကျသွားပြီး လူတိုင်းဟာ တန်းတူညီမျှဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတန်းစား မခွဲခြားဘဲ ပါတီပွဲလာသူအချင်းချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆိုဆက်ဆံကြတာ မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီရဲ့ သဘောတရားပါပဲ။
ရှေးခေတ်က အထက်တန်းလွှာတွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသူတွေဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ထင်တိုင်း ပြုမူပြောဆိုခွင့်မရှိပါဘူး။ အိနြေ္ဒသိက္ခာအပြည့်ရှိရပြီး လူမှုရေးစည်းကမ်းတွေအတိုင်းပြုမူရပါတယ်။
မျက်နှာဖုံးတပ်ပါတီမှာတော့ ဆင်းရဲချမ်းသာမခွဲခြားနိုင်တာကြောင့် လူသားအားလုံး ကိုယ်စိတ်ပျော်ရွှင်သလို ပြုမူပျော်ဆိုခွင့်ရကြပါတယ်။ စည်းကမ်းဘောင်အတွင်းကနေ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။
ဒါကတော့ မျက်နှာဖုံးပါတီသမိုင်းကြောင်းက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချက်တွေပါပဲ။ မျက်နှာဖုံးပါတီကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် အက်ဒ်မင်က သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးမယ်နော်။ နောက်ပြီး ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာလုပ်ရမလဲမသိသေးတဲ့ Single ယောင်းတို့ အတွက်ရောပေါ့။
အက်ဒ်မင်တို့ For Her Myanmar က ချစ်သူများနေ့မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲလေးမှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ ကိုယ့်လို Single မိတ်ဆွေသစ်တွေရှာမယ်၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဂိမ်းတွေကစားကြမယ်၊ သောက်စရာကလည်း Free Flow ဆိုတော့ အမုန်းဆွဲလို့ရသပေါ့။
အက်ဒ်မင်တို့ဘက်ကလည်း King တွေ Queen တွေ ရွေးပေးမယ် ၊ ကံစမ်းမဲတွေ ဖောက်ပေးမယ်လေ။ မျက်နှာဖုံးလေးတွေ တပ်ပြီး တက်ရမယ့် ပွဲဆိုတော့ ရင်ခုန်စရာကလည်း ကောင်းသေးနော်… (အလဲ့ စုံထောက်ကားတွေဆန်နေတာ 😛 ) နေရာက ဆီဒိုးနား၊ အချိန်က ည ၇ နာရီကနေ ၉နာရီထိ နေ့ရက်ကတော့ ချစ်သူများနေ့မှာပါရှင်…
ဒီတော့ အက်ဒ်မင်တို့ရဲ့ “Singles’ Night” အစီအစဉ်လေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒီလင့်ခ်လေးမှာ ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ ရပါတယ်နော်။ ထုံးစံအတိုင်း ပွဲတက်မယ်ဆိုရင် Register လေးတော့ လုပ်ပေးဖို့ လိုမှာပေါ့နော်… Register လုပ်ဖို့ကိုတော့ ဒီလင့်ခ် >>> http://bit.ly/2sS69TK လေးမှာ လုပ်လို့ ရပါတယ်ရှင့်… ဖေဖော်ဝါရီ (၅) ရက်နေ့ ထိ စာရင်းသွင်းပြီး ငွေလွှဲမယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ကတော့ Early Bird Discount 10% ကို ရရှိဦးမှာပါနော်….
ဘာလုပ်နာလဲ့… စာရင်းလာသွင်းကြတော့လေ 😛
References: avasflowers.net, allwomenstalk
Mask Party ဘာလဲ… ဘယျလဲပေါ့အေ.. 😛
အနောကျနိုငျငံမှာ ကငျြးပလရှေိ့တဲ့၊ မွနျမာပွညျအပါအဝငျ အာရှတိုကျတှမှောလညျး ခတျေစားလာပွီဖွဈတဲ့ မကျြနှာဖုံးတပျပါတီ ဒါမှမဟုတျ Masquerade Party or Mask Party ဆိုတာ ယောငျးတို့ ကွားဖူးမှာပေါ့နျော။
ဒီပါတီအကွောငျးကို သိပမေဲ့ သမိုငျးကွောငျးအခကျြအလကျ စုံစုံလငျလငျမသိဘူးဆိုတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ Mask Party ရဲ့ စိတျဝငျစားစရာအကွောငျးတှကေို ဝမြှေပေးမယျနျော…
၁။ Mask Party ဟာ ရှညျလြားတဲ့ သမိုငျးကွောငျးရှိပါတယျ။
မကျြနှာဖုံးတပျပါတီပှဲကို ဥရောပမှာ စတငျကငျြးပတဲ့ကာလကို အမြိုးမြိုးပွောဆိုကွပမေဲ့ ဆယျ့ငါးရာစုထကျတော့ နောကျမကဘြူးလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒီကာလဝနျးကငျြမှာ ဥရောတိုကျမှာမှ အီတလီနိုငျငံဟာ မကျြနှာဖုံးတပျပါတီတှစေတငျကငျြးပတဲ့ နိုငျငံလို့လညျးဆိုကွပါတယျ။
Related Article >>> ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ကွကှေဲစရာအကောငျးဆုံးနဲ့ ပဟဠေိ အဖွဈရဆုံး လြှို့ဝှကျခကျြ တဈခု
မကျြနှာဖုံးတပျပှဲတှစေတငျကငျြးပကတညျးက အဓိက ရညျရှယျခကျြဟာ ကိုယျဘယျသူမှနျးမသိအောငျ ရုပျဖကျြရတာပါ။ ဘာကွောငျ့ ရုပျဖကျြပွီးကငျြးပခဲ့ကွသလဲဆိုတာ အတိအကမြဆိုကွပမေဲ့ ပါတီကငျြးပပုံကတော့ တဈခုနဲ့ တဈခု မတူဘဲ ကှဲပွားပါတယျ။
တခြို့ပါတီတှကေ ပှဲတကျသူအခငျြးခငျြး ခနျ့မှနျးရတဲ့ ကစားနညျး ကစားကွသလို၊ တခြို့ကလညျး အစားအစာ မတညျခငျးခြိနျအထိ ရုပျဖကျြထားရတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဟိုရှေးခတျေကတညျးက အခုထိ တူညီတာက ပှဲတကျသူအားလုံး မကျြနှာဖုံးတပျပွီး ရုပျဖကျြရတာပါ။
၃။ လူတနျးစားညီမြှမှုကို ကိုယျစားပွုတယျ။
ဆငျးရဲ၊ ခမျြးသာ၊ ပညာမဲ့၊ ပညာတတျ၊ ဘာသာ၊ လူမြိုး ဆိုတာတှေ ဖယျရှားလိုကျရငျ အားလုံးဟာ လူသားတှပေါပဲနျော။ မကျြနှာဖုံးတပျ ပါတီဟာ ဒီသဘောတရားပါပဲ။
မကျြနှာဖုံးတပျပါတီကို စတငျ ကငျြးပတဲ့အခြိနျက ဥရောပတိုကျမှာ လူတနျးစား ခှဲခွားမှုအရှိနျမွငျ့တဲ့ ကာလပါ။ အထကျတနျးလှာတှကေ သာမာနျလူတနျးစားတှနေဲ့ ရောနှောခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မကျြနှာဖုံးတပျ ပါတီပှဲမှာတော့ လူတိုငျးဟာ မကျြနှာဖုံးတပျထားတာဖွဈလို့ အပျေါယံတှကှောကသြှားပွီး လူတိုငျးဟာ တနျးတူညီမြှဖွဈတယျလို့ သဘောထားကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လူတနျးစား မခှဲခွားဘဲ ပါတီပှဲလာသူအခငျြးခငျြး ရငျးရငျးနှီးနှီး ပွောဆိုဆကျဆံကွတာ မကျြနှာဖုံးတပျပါတီရဲ့ သဘောတရားပါပဲ။
ရှေးခတျေက အထကျတနျးလှာတှဟော ဂုဏျသိက်ခာကွီးမားသူတှဖွေဈတာကွောငျ့ စိတျထငျတိုငျး ပွုမူပွောဆိုခှငျ့မရှိပါဘူး။ အိန်ဒွသေိက်ခာအပွညျ့ရှိရပွီး လူမှုရေးစညျးကမျးတှအေတိုငျးပွုမူရပါတယျ။
မကျြနှာဖုံးတပျပါတီမှာတော့ ဆငျးရဲခမျြးသာမခှဲခွားနိုငျတာကွောငျ့ လူသားအားလုံး ကိုယျစိတျပြျောရှငျသလို ပွုမူပြျောဆိုခှငျ့ရကွပါတယျ။ စညျးကမျးဘောငျအတှငျးကနေ ဘယျသူ့ကိုမှ မထိခိုကျစဖေို့တော့ လိုတာပေါ့နျော။
ဒါကတော့ မကျြနှာဖုံးပါတီသမိုငျးကွောငျးက စိတျဝငျစားဖှယျရာအခကျြတှပေါပဲ။ မကျြနှာဖုံးပါတီကို စိတျဝငျစားတယျဆိုတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ အကျဒျမငျက သတငျးကောငျးလေးတဈခုပေးမယျနျော။ နောကျပွီး ခဈြသူမြားနမှေ့ာ ဘာလုပျရမလဲမသိသေးတဲ့ Single ယောငျးတို့ အတှကျရောပေါ့။
အကျဒျမငျတို့ For Her Myanmar က ခဈြသူမြားနမှေ့ာ စိတျလှုပျရှားစရာပှဲတဈခုကငျြးပဖို့ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီပှဲလေးမှာ ဘာတှလေုပျလို့ရလဲဆိုတော့ ကိုယျ့လို Single မိတျဆှသေဈတှရှောမယျ၊ ပြျောပြျောပါးပါး ဂိမျးတှကေစားကွမယျ၊ သောကျစရာကလညျး Free Flow ဆိုတော့ အမုနျးဆှဲလို့ရသပေါ့။
အကျဒျမငျတို့ဘကျကလညျး King တှေ Queen တှေ ရှေးပေးမယျ ၊ ကံစမျးမဲတှေ ဖောကျပေးမယျလေ။ မကျြနှာဖုံးလေးတှေ တပျပွီး တကျရမယျ့ ပှဲဆိုတော့ ရငျခုနျစရာကလညျး ကောငျးသေးနျော… (အလဲ့ စုံထောကျကားတှဆေနျနတော 😛 ) နရောက ဆီဒိုးနား၊ အခြိနျက ည ၇ နာရီကနေ ၉နာရီထိ နရေ့ကျကတော့ ခဈြသူမြားနမှေ့ာပါရှငျ…
ဒီတော့ အကျဒျမငျတို့ရဲ့ “Singles’ Night” အစီအစဉျလေးကို စိတျဝငျစားတယျဆိုရငျ ဒီလငျ့ချလေးမှာ ဝငျရောကျလလေ့ာလို့ ရပါတယျနျော။ ထုံးစံအတိုငျး ပှဲတကျမယျဆိုရငျ Register လေးတော့ လုပျပေးဖို့ လိုမှာပေါ့နျော… Register လုပျဖို့ကိုတော့ ဒီလငျ့ချ >>> http://bit.ly/2sS69TK လေးမှာ လုပျလို့ ရပါတယျရှငျ့… ဖဖေျောဝါရီ (၅) ရကျနေ့ ထိ စာရငျးသှငျးပွီး ငှလှေဲမယျဆိုတဲ့ ယောငျးယောငျးတို့ကတော့ Early Bird Discount 10% ကို ရရှိဦးမှာပါနျော….
ဘာလုပျနာလဲ့… စာရငျးလာသှငျးကွတော့လေ 😛
Tagged Event, history, Knowledge, Mask Party
ဘယ်သူနဲ့မှ မမျှဝေသင့်သော တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ပစ္စည်းများ
Posted on November 7, 2017 Author Bori
Sharing is caring ဆိုတာမှန်ပါသည် သို့သော်…
နေ့စဉ်သောက်ရမယ့် တားဆေးတွေကို မေ့ပြီးမသောက်မိတဲ့အခါ….
Posted on March 26, 2019 March 28, 2019 Author Yin Sandi Ko
တစ်ရက်သောက်ဖို့မေ့သွားရင် နှစ်လုံးပူးတစ်ပြိုင်တည်း သောက်လိုက်ရမလား
Posted on November 16, 2017 Author Nandar
ဈေးအကြီးဆုံး စိန်စေ့စပ်လက်စွပ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော် (၅) ဦး